Fanosihosena fanolo-tanana eo amin'ny fiangonan'i Shina, fanodinana solosaina amin'ny solosaina, fanodinana solitany fanodinana solonanarana
Description:Anti-fingerspace,Fitaovana fanodinana solosaina,Mipoitra ny felam-patin'antoka,Mitafy loko matevina,,
Home > Products > Fitaovana fanodinana solosaina
Ny vokatra avy amin'ny Fitaovana fanodinana solosaina , mpanofana manokana avy any Shina, Anti-fingerspace , Fitaovana fanodinana solosaina mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Mipoitra ny felam-patin'antoka R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Fiarovan-tena avo lenta antonona ho an'ny lantihy Contact Now
AF dia endri-pandrefesana vita amin'ny fluorine ary vita amin'ny rafitra manokana amin'ny hormonina fluorosilicone. Manana fiantraikany mahery vaika sy hafanà hafahafa izy io, ary mihatsara be ny fahasimbana sy ny fahamendrehana raha oharina amin'ny fluorosilaney mahazatra. Amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fingpopotam-panafana amin'ny finday fitaratra, fitaratra glasy, fampirimina elektronika, fitaovana fitaratra sy metrôlika metaly (ny tontolon'ny ravina dia maneho ny vokatra avy amin'ny lotus, ny fanamafisana ny fingotra ary ny fingododim-behivavy) miaraka amin'ny silicone aluminium avo, fanondranana solika fanodinana solika amin'ny fantsom-panafody.
Ny fanehoam-pirahalahiana: ny hafanana mangatsiaka tsy misy fotony na loko mangatsiaka. Mahaiza miorina: aorian'ny fanerena miverina sy miverina 3000 heny (lany 1kg, 0000 # volon'ireo vy, faritra mifandray 10mmx10mm), ny angona ahazoana rano dia mihoatra ny 105 °
Anti-fingerspace Fitaovana fanodinana solosaina Mipoitra ny felam-patin'antoka Mitafy loko matevina Anti Fingerprint Spray